Fijerena baolina kitra :: Polisy dimampolo sy telonjoto sy arivo hahetsika • AoRaha
Fijerena baolina kitra Polisy dimampolo sy telonjoto sy arivo hahetsika
Hisahana ny fandrin­drana ny fifamoivoizana sy fitandroana ny filaminana mandritra ny lalao baolina kitra amin’ny dingan’ny
ampahefa-dalan’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN 2019 anio alina, ny avy ao amin’ny Polisim-pirenena. Polisy miisa dimampolo sy telonjato sy arivo no haparitaka manokana eto an-dreni-vohitra. Hahetsika ihany koa ny polisy rehetra any amin’
Hiasa avokoa ny eny anivon’ ny kaomisaria, ny hery vonjy taitra samihafa. Hisy ny polisy hanao fanamiana sivily. Hampiana isa ireo polisy efa mipetraka eny amin’ny toe­rana be olona. «Misy ny laminasa hanamafisana ny efa natao teo aloha tamin’ny
niatrehana ny ampahavalon-dalana. Hisy polisy misahana ny fandrindrana ny fifamoi­voizana fotsiny. Toy izany koa ny fisorohana an’ireo olona mitondra fiara na môtô mandeha mafy sy amin’ny lalana tsy tokony haleha. Manao antso avo amin’ny vahoaka izahay mba hifaly ao anaty filaminana, mba tsy hanimba zavatra», hoy ny Commissaire Divisionnaire de Police Rakoto­zanany Dany Marius, tale jeneralin’ny Polisim-pirenena.
Manamafy ny Polisim-pirenena fa hosaziana ireo rehetra tratra manao fandikan-dalàna. Tsiahivina fa rakotra olona ny ankamaroan’ny arabe sy ny toerana malalaka teto an-drenivohitra, taorian’ny fandresen’ny ekipa malagasy Barea tamin’ny lalao ampahavalon-dalana tamin’ny alin’ny alahady lasa teo.